5 Arrimood oo yareeya Baruurta Caloosha - Hablaha Media Network
5 Arrimood oo yareeya Baruurta Caloosha
HMN:- Baruurta ayaa waayihii dambe waxaa cabasho ka muujinayay malaayiin dad ah oo ku kala jooga daafaha dunnida, iyadoo arrintaasina loo aaneeyo inay mas’uul ka tahay habka qofku u nool yahay.
Dad badan ayaa aaminsan in waxa keliya ee wax ka qaban kara arrintan inay tahay jimicsiga iyo raashinka oo la iska yareeyo, haddaba lamaane.net wuxuu idinla wadaagayaa maanta waxyaabaha kaa caawin kara inaad ka dagaalanto cayilka, waxaana ka mid ah:
1. Cuntada badda: Cuntada badda laga soo bixiyo sida nuucyada kala duwan ee hilibka malaayga iyo aargoosada ayaa ka mid ah waxyaabaha lagula dagaalamo cayilka iyo buurnida. Waxaa wanaagsan in qofka hilib cunaya uu cuno hilibka cad oo kala ah malaay (kaluun) iyo digaag.
2. Cunista Qaraha: Qaraha ayaa la sheegay inuu saameyn weyn ku yeesho dhiiga halbowlaha waxaana uu yareeyaa halista buurnida caloosha. Cilmi-baaris la sameeyay ayaa sheegtay in qarahu uu yareeyo dufanka iyo subaga jirka.
3. Yaanyada: Waxaa hubaal ah in yaanyada ay ka jiraan fitimiino, sidaas darteed waxaa fiican inaad joogteyso isticmaalka yaanyada si baruurta calooshu ay kaaga yaraato, shiido 9 xabo oo yaanyada loo yaqaano oo -oxo-octadecadienoic tomato, waxaad kala kulmi doontaa natiijo wanaagsan.
4. Boorashka: waxyaabaha buurnida yareeya waxaa ka mid ah boorashka, waxaa fiican inaad subaxdii ku quraacato waayo isaga laguma gaajoodo, ogoow isticmaalka boorashka qaarkiis uma wanaagsana dadka qaba cudurka sonkorta.
5. Khudaarta Cagaaran: Qudaarta cagaaran waxay leedahay faa’iidooyin badan oo aan la soo koobi karin, waxayna jirka ka difaacdaa baruurta, gaar ahaan baruurta caloosha, waxaa fiican in subaxda hore ka hor xilliga quraacda la cuno qudaarta cagaaran, waxaad kala kulmi doontaa isbeddel Insha’Allaah.
Haddaba waxyaabaha aan kor ku soo sheegnay dhammaantood waa kuwo laga heli karo dalka Soomaaliya islamarkaasina ka mid ah waxyaabaha raqiista ah ee qof waliba ay heli karto waayo intooda badan dalkeenna ayayba ka baxaan sidaas darteed qofkii doonaya inuu caatoobo waa inuu arrimahan aan kor ku soo xusnay uu badsadaa Insha’Allaah, waxaa hubaal ah inuu qofku dareemi doono isbeddel iyo natiijo aad u wanaagsan oo uu ku farxo.
Daawo Muuqaal laga yaabo inuu kaa caawiyo inaad iska yareyso baruurta caloosha.